CopyTrans u Mac - Copy Music, Playlists, Video, iwm
> Resource > Mac > CopyTrans u Mac - qalabka ugu fiican si ay u gudbiyaan Music, Playlists, Videos
CopyTrans waa qalab si fiican u yaqaan loo isticmaalaa in lagu wareejiyo music, playlists, sawiro, iyo videos, iwm ka iPod / iPhone / iPad in Lugood iyo Mac. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u wareegeen Mac ah, waxaad ka heli doontaa in aad uma isticmaali karo CopyTrans dambe, sababta oo ah version CopyTrans Mac aan la heli weli. Sidaa darteed, haddii aad rabto in lagu wareejiyo files warbaahinta ka iPod / iPhone / iPad in aad Mac, ama sida dib, waa inaad u dhigma ah CopyTrans u Mac. In socda, waxaan jeclaan lahaa in aan idinla wadaago sida ay u gaarto goolkii: wareejinta files warbaahinta iPod / iPhone / iPad in Lugood Library ama Mac.
Aan waxa ugu horeeya ee hore saaray, qalab aan ku talinayaa waa Wondershare TunesGo (Mac) . Waxay si buuxda u taageersan OS X dambeeyay El Capitan iyo macruufka dambeeyay 9. Waxaa awood u isticmaala Mac in aad nuqulka music iyo playlists ka iPod taabashada ah, iPhone, iPad ama si toos ah u Music Lugood Maktabadda on Mac la ratings iyo ciyaaro dacwadood. Ka hor inta habka wareejinta bilaabmaa, waxay kala mid dhigaysaan heesaha oo ku iDevice oo kuwan ka jira Lugood Music Library. Marka aan sidaa yeelno, waxa keliya oo nuqul kuwaas kuwaas oo ka mid ah Lugood ay u Library Lugood ah. No nuqul oo dhibaatana ma leh. Iyo dadka isticmaala Mac kaloo isticmaali kartaa in aad nuqulka songs, videos, sawiro, iyo in ka badan si ay u Mac. Badan oo ku saabsan Wondershare TunesGo (Mac) Baro.
Hel version maxkamad si xor ah u leeyihiin isku day ah! Waxaan doonayaa inaan qaato iPhone ah oo tusaale u ah, isagoo u sheegay sida loo isticmaalo ee u dhigma CopyTrans Mac aad. Kale CopyTran Windows waa la heli karaa si ay u soo bixi sidoo.
Tallaabada 1. Ku rakib Equivalent Mac ee CopyTrans
Download iyo rakibi qalab aad Mac. Ka dib markii ay ku rakibidda, waxaa isla markiiba abuurtaan. Raadi si aad cable USB iPhone oo ku xirmaan aad iPhone iyo Mac ah. Si dhakhso ah aad arki doonaa in qalab CopyTrans Mac muujiyaan aad iPhone uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Nuqul Music ka Your iPhone in Lugood Library iyo Mac
On uu furmo suuqa hoose, waxaad ka arki kartaa laba doorasho: Si Lugood iyo Si Mac. By gujinaya "Si Lugood, heesaha oo dhan iyo playlists lagu wareejin doonaa Lugood Music Library aad Mac aan nuqul. By gujinaya" Si Mac ", ka dibna aad kartaa heeso gurmad ka iPhone si gal ah ku saabsan Mac. Haddii aad rabto in aad xulo qaar ka mid ah heesaha si ay u gudbiyaan, fadlan guji tab Music dhinaca bidix si ay u galaan guddi ay gacanta Music ah si ay u fuliyaan nidaamka.
Tallaabada 3. Maamul Photos aad iPhone
Dhinaca bidix, waxaad tahay inay awoodaan inay guji "Sawirro" si ay u galaan guddi ay gacanta ku sawiro. Laga soo bilaabo halkan, aad awood u sawiro ama albums sawir (midig click) wareejiyo si aad Mac. Haddii aadan rabin inaad si ay u sii, sidoo kale iyaga waxaad tirtiri kartaa ka iPhone.
Tallaabada 4. Transfer Videos ka Your iPhone si Mac
By gujinaya Movies ama TV muujinaysaa bidixda, waxaad yeelan doontaa in ay u dhoofiyaan videos in aad Mac. Maxay u fiican, waxa kale oo aad isticmaali kartaa in aad ku darto Mac videos in aad iPhone loogu daawashada. Video kasta waxaa lagu taageeray.
CopyTrans u Mac u dhiganta kuu ogolaanaya in aad nuqul ka music, videos, sawiro, iwm ka iDevices aad si aad Lugood Library iyo Mac sida version Windows ee CopyTrans. Hel version maxkamadda si loo soo dajiyo aad Mac hadda!